अर्गानिक सपनामाथि ब्रोइलरहरुको रजाइँ कहिलेसम्म ?
यहाँ हरेक दिन हज्जारौं सपनाहरु थानकोट र साँगा नाका हुँदै सहर पस्छन्। रसिला, भरिला, रंगीन र शक्तिशाली सपनाहरु असरल्ल छरिन्छन्, रत्नपार्क, बानेश्वर र सहरका अन्तरकुन्तरहरुमा। र, क्रमशः क्रमशः ती सपनाहरु निरस, खोक्रो, कमजोर र डिस्कलर हुन थाल्छन्।
सपनाको पाइन खिइँदै खिइँदै जान्छन्। भुत्ते हुन्छन्– अर्जाप्ने आरनको अभावमा। गाउँका प्राङ्गारिक सपनाहरु सहरको रसायनले कमजोर बनाउँछ। यहाँको ब्रोइलर सपनाहरुमा लोकल सपनाहरु विलाउँछन्। कारण, यहाँको वायु र भुप्रदषणले मात्रै होइन, सबैभन्दा बढ्ता विचार र सोचको प्रदूषणको सिकार हुन्छन्, भर्जिन र लोकल सपनाहरु।
प्रदुषित सोचले विचारको ओजन तह नासिँदै गएको छ। ठालू सपनाहरु रजाइँ गर्छन्, भर्जिन सपनाहरु माथि। र, थाहै नपाई कुरुप र फतलफाँडो भइसकेको हुन्छ, गाउँले सपनाहरु। विचरा ! सोझा गाउँले सपनाहरु।
सहर पस्दाका भरिला सपनाहरु जिङरिङ्ग र जर्खराउँदो भएर मेनपावर कम्पनी, ओभर्सिज र राहदानी विभागमा लामबद्ध हुन्छन्। थाकेका सपनाहरु रत्नपार्कमा लमतन्त सुतिरहेका हुन्छन्। वीर अस्पताल अगाडि साँझ परेपछि शरीर बिक्रीको बार्गेनिङमा हुन्छन्। र, ती सपनाहरु क्याविन, डान्स र दोहोरीमा भुल्छन्। कति सपनाहरु एयरपोर्टमा अन्तिम बिक्रिमा खडा हुन्छन्। सेतो डोरीमा दुई चार वटा क्यातुके फूल उनेर खाडीमा जाने हवाइजहाजको क्यू पर्खेर वस्छन्। स्वदेशमै निख्रेको सपनाको रस कुवेत, बहराइनमा पुगेर झन् सिठ्ठो भएर फर्केका सपनाहरुप्रति यहाँ कसैलाई दया जग्दैन।
छिचिमिरा सरीका सपनाहरु अन्धाधुन्ध भौतिरहेका हुन्छन्। सिंहदरवार, बालुवाटार र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र वरिपरी। त्यही सपनामाथिको खेलको ब्याज खाइरहेका हुन्छन्, ठालु सपनाहरु भित्रभित्रै। फिल्मको हिरो बन्ने सपना, बरिष्ठ पत्रकार वा साहित्यकार बन्ने सपनाहरु, उच्च आहोदाको सरकारी जागिरको सपनाहरु, अन्तराष्ट्रिय खेलाडी बन्ने सपनाहरु, व्यापारी बन्ने सपनाहरु, कलाकार बन्ने सपनाहरु झुसे दाह्री, रिङ्कल परेको गाला र जर्खराउँदो कपालमा गल्लीगल्लीमा छट्पटाई रहेका छन्। कति सपनाहरु साँझ भट्टीहरुमा भुलिरहेका छन्। त कति पूर्व शक्तिशाली सपनाहरु नशामा एडिक्ट भएका छन्, अपराधिक भएका छन्। र, कति सपनाहरुले त आत्महत्या गरिरहेका छन्।
एक पोको मुलाको सिन्की र एक पोको गुन्द्रुकसँगै सहर पसेका सपनाहरुको साखलाई यो निठूर सहरले चुसिदिएको छ। धर्ती टेकेर चन्द्रमा टेक्ने सपनाको जग भाँचिदिएको छ– सहरले। मक्किएको बुढो रुखको हाँगो समातेर सगरमाथा चढ्ने सपनाको अभिलाशामा ‘एसिड’ खन्याइदिएको छ। हो, त्यहीं विरुप सपनाको अस्थिपञ्जरहरु भौतारिरहेका छन्, चोक, गल्ली र पार्कहरुमा।
आफ्नो मात्र होइन, बाआमाको मौजुदा सपनालाई समेत बोकेर छिरेका टठिला सपनाहरुको विरुप चित्र हो यो सहर। र, बाआमाको सपनाले ‘भूत’ बनेर तर्साउँदैछन्, स्वयम सपनाहरुलाई। गाउँको मोही पिएर भरिलो भएको सपनाको शरीर आर्सनिक मिसिएको पानीले टिठ लाग्दो भएको छ। गालाका केस्राकेस्रामा भरिएको सपनाको रस निथ्रिएर दयालाग्दो भएको छ। हो, यो काठमाडौंले दिनदहाडै सपनाको डकैती गरेको छ। बाआमाका सपनामाथि बलात्कार गरेको छ।
नेगेटिभ सपनाहरु चम्काउँने कलरल्याबको खोजिमै सहिद भएका छन्, सपनाहरु। झन् झन् डिस्कलर्स भएका छन्, सपनाहरु।
विचलित सपनाहरु बेलबबखत विद्रोहको नाताबाना बुन्छन्। विद्रोही हुन्छन् पनि। तर, त्यही सपनामध्ये एउटा सपना ठालू पल्टन्छ। र खेल्छ, तीनै अन्य हज्जारौं सपनाहरुमाथि। सब सपनाहरु सचेत हुन जरुरी छ। सपनाको आफ्नै रणनीति हुन जरुरी छ। सपना धुलाउँने कलरल्याब पनि आफैंले खोल्न पर्ने छ। सहरबाट विस्थापित भएर पनि केही सपनाहरु रंगीन बनेका नजिरहरु छन्। बरु, त्यसकै अनुसरण गर्नु पर्दछ। आफ्नो सपनालाई आफैंले धारेहात लगाएर सपना रंगीन हुन सक्दैनन्। आफ्नो सपनाको स्वमित्व आफैले राख्नु पर्छ। सपना डिस्कलर्स हुनबाट सपनाले नै जागाउँनु पर्छ। जय सपना।